NextMapping | Pkwadebe gị maka ọdịnihu Ọrụ
Pkwadebe gị maka ọdịnihu Ọrụ
Ebumnuche anyị bụ ịmepụta ụwa ka mma site na azụmaahịa. NextMapping ™ bu uzo anyi.
Anyị kwenyere na ọdịnihu ọrụ ga-adabere na ndị isi, ndị otu na ndị ọchụnta ego dị ka gị iji mepụta uru pụrụ iche maka ndị ahịa gị na ndị ọrụ gị.
Anyị bụ ndị otu jikọtara ọnụ na ntinye aka anyị nke inyere ndị mmadụ aka, ndị otu na nzukọ niile site na NextMapping ™ ọdịnihu nke na-agbakwunye nnukwu uru na ahụmịhe dị mma na ndị ahịa ha na-ejere, ndị ọrụ niile dị ọnụ ahịa ha nwere na njem na nsonaazụ azụmahịa ahụ. .
Site na usoro NextMapping proven pụtara pụtara na usoro azụmaahịa azụmahịa anyị (r) nke na-enyere ụlọ ọrụ aka ịkọ mgbanwe na ebe ọrụ ma hụ ọdịnihu ọrụ ugbu a. Anyị na-enye ngwaọrụ, akụrụngwa, nghọta na ọzụzụ iji nyere ndị ahịa anyị aka ị nweta uru asọmpi na ihe ịga nke ọma.
Oge maka NextMapping ™ Ọdịnihu Gị Ugbu A! Anyị nwere ike inyere aka - họrọ nke:
Achọrọ m ịmụtakwu banyere NextMapping ™ maka isi
Achọrọ m ịmụtakwu banyere NextMapping ™ maka ìgwè
Achọrọ m ịmụtakwu banyere NextMapping ™ maka oru buu igba n'ulo
Zute NextMapping anyị™ onye nchoputa
Cheryl Cran bụ onye guzobere NextMapping ™ / NextMapping.com yana onye isi ụlọ ọrụ nne na nna Synthesis na Work Inc.
Aghọtara dị ka # 1 Ọdịnihu nke Ọrụ influencer site Onalytica, na onye edemede nke akwụkwọ 9 gụnyere mbipụta nke abụọ "NextMapping ™ - Na-atụ anya, Navigate na Mepụta Ọdịnihu nke Ọrụ" yana akwụkwọ ọrụ ibe.
Utu aha akwukwo ndi ozo gunyere “Nka nke ndu ndu - ngbanwe akuko n’agba oso oso” (Wiley 2015), “101 Uzo iji mee ka Mbido X, Y and Zoomers nwee obi uto na oru” (2010) na akwukwo ndi ozo nke 4. ndu ichoro icho icho icho ichoro iru oru.
Egosiputa ochichi echiche ọdịnihu nke Cheryl na mbipụta dịka Huff Post, Forbes, Magazin IABC, Magazine Iwu, Metro New York, Magazine, Readers Digest, CBS Online, NBC Online, Fox Online na ndị ọzọ.
Kemgbe ihe karịrị afọ iri abụọ Cheryl wuru aha ọma maka ịnye ndị ahịa uru pụrụ iche gụnyere AT&T, Bell Mobility, Omnitel, Gartner, British Telcomm, Manulife, yana ụlọ ọrụ dị n'etiti na ndị ọchụnta ego na ụlọ ọrụ ndị gụnyere teknụzụ, ahụike, ọrụ ugbo, ego, mkpuchi na ndị ọzọ.
A zụlite NextMapping as dịka akara ahịa azụmaahịa anyị nke na-emetụta ọrụ Cheryl na nyocha niile gbasara ọdịnihu ọrụ yana onye ndu chọrọ ịnyagharị na ebe ọrụ. Oge erugo ịghara ịnụ banyere ọdịnihu mana iji NextMapping ™ ruo ebe ahụ! Ekwesịrị iji teknụzụ dị na ọrụ iji kwadebe maka ọdịnihu yana itinye uche na otu teknụzụ nwere ike isi meziwanye ihe ndị mmadụ na-eweta.
Isiokwu a na-ahụkarị na ọrụ ndụ niile nke Cheryl bụ 'ndị mbụ' na usoro nke abụọ iji mepụta ọdịnihu mmadụ, na-enyere ụlọ ọrụ aka iru ikike onye ndu chọrọ 'ịgbanwe ụwa site na azụmaahịa.'
Anyị NextMapping™ strategist
Anyị Cheryl Cran siri nweta ọzụzụ na ịgba akwụkwọ maka ileba anya na azụmaahịa gị site na otu nzacha ahụ Cheryl na-eme ndị ahịa ya niile.
Ha ga-enye gi nzaghachi nke 1-on-1 maka otu esi nweta nkà ihe ọmụma ya na ụlọ nke NextMapping ™, ọzụzụ na usoro ga-abara gị na ụlọ ọrụ gị uru ma nye gị ike site na ijikere maka Ọdịnihu nke Ọrụ ma were azụmahịa gị gaa na ozo.
Dika egosiputara n’ime
Akpọrọ #1 Ọdịnihu nke Ọrụ Ọrụ
Onye gụsịrị akwụkwọ na mmemme ihe mmụta
Akpọrọ aha na Top 10 Ọdịnihu dị n'ihu nke Ọrụ Na-akpali & Ndị Na-ama Jijiji na
Chọrọ enyemaka anyị?
Anyị emechiela gị - rute anyị ga-achọ ijikọ gị.